MAHAIZA MANETSA RAVALO – MyDago.com aime Madagascar
MAHAIZA MANETSA RAVALO
Nanomboka ny taona 2009 dia tsy nitsahatra ny namitaka ny filoha Ravalomanana hatrany ireo mpanao politika. Ny lehiben’ny delegasiona ankolafy Ravalomanana tamin’izany dia Jacques Sylla, izay nirotsaka nanampy tosika ny mpanongam-panjakana teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai. Nisy ihany koa ny fifanarahana tany ivelany toy tany Maputo, Addis Abeba, Pretoria, Gaborone, Sandton, Seychelles I sy II, izay niafara tamin’ny fanaovan-tsonia. Rehefa nandefitra anefa ny filoha Ravalomanana dia tsy notanterahana ny nifanarahana fa nisy namadika hatrany. Nisy ihany koa ireo mpiara-dia azy izay nivarotra mihitsy ny tolona natao ary nivadika nankany amin-dRajoelina ka anisan’izany Raharinaivo, Yves Aimée, Alain Andriamiseza sns… Teo ihany koa ny fifanaovantsonia ny tondrozotra ny 11 Septambra 2011. Izay zavatra nifarahana tao anatin’izay anefa dia mbola tsy notanterahana ihany koa, tafiditra ao anatin’izany ny andininy faha 16,17,18, indrindra ny andininy faha 20 izay milaza fa mody tsy misy fepetra ireo sesi-tany politika any ivelany ka anisany ny filoha Ravalomanana. Nanomboka teo dia nisy ny fiaraha mitantana ny tetezamita ka noteren’ny sehatra iraisam-pirenena hanao fifidianana isika. Nisy indray ny fepetra napetraky ny Sadc ny amin’ny tsy firotsahan-dRajoelina sy Ravalomanana na ny Ni.. Ni… izany. Nanaiky nandefitra tamin’izany ny filoha Ravalomanana ary nandrotsaka an-dRamatoa vadiny. Tsy mbola neken’ny sehatra iraisam-pirenena sy ny Ces ihany koa anefa izany ka niafara tamin’ny fanalana azy tsy ho kandida. Nasaina nanohana kandida iray tamin’ireo izay nahazo fahazoan-dalàna hilatsaka ny filoha Ravalomanana. Nanohana kandida izy tamin’ny fifidianana filoham-pirenena ka ny nifanarahana tamin’izany dia ny fampodiana ny filoha Ravalomanana eto an-tanindrazana rehefa lany io kandida io. Ny zavanisy dia nanao izay tsy hahalany azy io kandida notohanana io ka nahavita namadika azy tamin’ny resabola. Na izany aza nanaiky an’I Hery Rajaonarimampianina ho filoham-pirenena izy rehefa nivoaka ny valim-pifidianana noho ny fitiavan-tanindrazana sy filaminana tao aminy. Betsaka ny resaka nandeha fa nisy fifanarahana miafina nataon’ny roa tonta tamin’izany. Tsy azo antoka anefa izany. Nanaiky hatrany Ravalomanana ary ireo depiote 20 lany tamin’ny anaran’ny movansa Ravalomanana aza dia natolony ho an’ny vovonona manohana ny filoham-pirenena (Pmp) hiaro ny filoha Rajaonarimampianina ary raha tsy ao ny movansa Ravalomanana dia tsy ho maro an’isa mihitsy ireo. Andrasana izay ho fanendrena izay ho Praiminisitra, ny azo inoana dia tsy avy amin’ny movansa Ravalomanana izany. Ny filohan’ny Antenimieram-pirenena sy ireo birao maharitra rehetra dia tsy ahitana ny olon-dRavalo. Vao nanendry Pds Antananarivo Renivohitra ihany koa ny fitondrana dia ny mpifanandrina amin’ny filoha Ravalomanana no notendreny na dia fantatry ny mpitondra aza fa ny mponin’Antananarivo , tsy mankasitraka ireo niray petsapetsa tamin’ny fanonganam-panjakana niaraka tamin-dRajoelina, fa mbola miraiki-po amin’ny filoha Ravalomanana hatrany, modiany fanina ny olon-dRavalo izay malaza fa maro an’isa ary manam-pahaizana.
Araka izany dia tsy olon-dRavalo no notendren’ny fitondrana ho Pds Antananarivo fa ailik’I Hery Rajaonarimampianina tsikelikely ny movansa Ravalomanana ary na hitsangana aza ny governemanta dia tsy ahazo ny minisiteran’ny fiandrianam-pirenena toy ny minisiteran’ny fitsarana, ny minisiteran’ny vola, ny filaminana, ny MAE, sns… ny movansa Ravalomanana. Tsy maintsy minisitera izay tsy ahavitana zavatra firy no omeny eo. Raha ity lahatsoratra ataonay ity dia azo ilazana fa tsy hampody an’ I dada ny fitondran’I Hery Rajaonarimampianina, hanendry praiminisitra aza mitavozavoza be ihany mainka fa ny handray fanampahankevitra lehibe toy ny fampodiana ireo sesintany ? Ny tsy azo lavina aloha dia nanao ezaka nandray fanapahan-kevitra tamin’ny fanesorana ny SGP, nanafoana ny Fis, Dst, izay nanao tsindry hazo lena ny movansa Ravalomanana hatrizay. Nitohy tamin’ny fanesorana ny mpikambana sasany tao amin’ny HCC sy ny DG-ny Acm izany izay nanana endrika fanapahan-kevitra politika ka ny tsy hampody an’I dada no tao an-dohany. Nanala ihany koa ny talen’ny OMERT, Augustin Andriamananoro, izay nanakatona ny onjam-peon’ny movansa Ravalomanana toy ny Mbs, Mada, Fahazavana. Nandray fanapahan-kevitra ihany koa izy amin’ny fiarovana ny orinasa Tiko. Ireo rehetra ireo dia midika fa nanao pimaso tamin’ny filoha Ravalomanana ingahy Hery Rajaonarimampianina. Ny antony dia efa fantany fa manana ny tanjany eo amin’ny sehetra iraisam-pirenena ny filoha Ravalomanana ary tsy afaka handroso raha tsy misy famatsiam-bola avy amin’ny any ivelany. Hateza ve izany fiarahamiasa izany sa hanao izay hahazoana famantsiam-bola sy fahatokisana iraisam-pirenena ny mpitondra amin’izao fotoana izao ?Ny ahiahin’ny vahoaka mantsy dia sao mbola hatao haingon-tseza (tsehatra) fotsiny ny movansy Ravalomanana fa tsy ho tanterahana ny zavatra takiany.Hatreto aloha tsy mbola tafody ny filoha Ravalomanana ary tsy misy soritsoritrany amin’izany satria ny Notam nofoanana fa ny didy fampisamborana mbola mitoetra eo ihany. Mbola tsy misy ny famoahana ireo gadra politika miaramila izay mpiaradia amin’I dada toy ny Jeneraly Raoelina. Inona no antony ? eo amin’ny sehatry ny haino amanjery dia tsy mbola hita taratra ny fanokafana ny radion’ny movansa Ravalomanana, tsy misy taratasy mihetsika ny amin’izany. Nahavita nanao ireo ezaka voatanisa teo ambony ireo ny mpitondra amin’izao na dia tsy mbola nanendry izay ho praiminisitra aza koa nahoana no tsy hahavita hanokatra ny haino amanjery? Hamoaka ny gadra politika? Hampody ny sesitany?
Raha ny lojika politika aloha, ny zanaka an-trano aza mahavita mamadika sy mamingana ny filoha Ravalomanana ka vao mainka ny hafa? Ny ho avy no hamaritra izany rehetra izany. Ny azo ambara dia tokony hahay haka lesona tamin’ireo zavatra nitranga teto amin’ny firenena ny filoha, hahay hiady ireo zavatra niadiany hatrizay, fa tsy handefitra lava izao…koa mahaiza manetsa Ravalo fa hafa ny anio sy ny omaly.
CST Jeanson : Ravalo tsy maintsy mody !
Auteur Solo Razafy*Publié le 12 mars 2014 12 mars 2014 Catégories Politique
15 réflexions sur « MAHAIZA MANETSA RAVALO »
Tena marina izany fa mijaly ny vahoakanao e
Tena naleoko lavitra ireo izay nahasahy tonga dia nisintaka toy izay ireto
voalavo sy mpamosavy malemy mbola ao dia ao @ ankolafy ao, eny na hatr@’izao aza.
Ity KISONIA, K’ BIZU2, ity FISOLELAHANA, tena MAHONENA!!!ZANA-BARATRA e!!!MPITARI-BATO VILAM-BAVA.
Ny ahiako mafy eto dia ny HO HANAOVANA FITAOVANA an’i ANKOLAFY RAVALOMANANA mba ahazahoana ilay
FANKATOAVANA fotsiny dia ho dakana indray e!!!Dia iza no mahazo tombontsoa???ny mpisolelaka!
Tena lasa mankaleo mihintsy izao ity FANINDRAINDRANA an’i Rajao ao @ MAGRO ao,fotsiana tsisy pentina mihintsy
Rajao, tsy hay hoe : avy aiza ny BAIKO?zay ve no nandehanan’ i Kotovelo niaraka taminy tany Paris vao hoe izy no lany
mba HANERY ny mpitarika fa » TSY MAINTSY FOTSINA MADIODIO RAJAO? », ny fanekena azy aza efa tsy fidiny,amiko.
Ho hita eo ny adin’i dada8! Ho mora kokoa ve ny maka ny fitondrana noho ny mitazona azy?
Ny nahavery ilay fitondrana t@ 2009 mihitsy no mahazendana hatramin’izao satria de tena votsitra tahaka ny savony an-tanana ilay izy!
Ankehitriny de ny fomba hiverenena an-tanindrazana sy eo @ fitondrana no ady hatrehin’i dada8! De ny hiara mamindra @ hery vaovao no hitany fa mety ahavitany izany! Tena milalao menarana mihitsy satria mety hifoteran’ny rambony avy hatrany nefa tsy maintsy mila azy koa an!
Mahaiza manetsa ravalo! raha manaiky tsy hanao politika intsony i dad8 fa hanao mpandraharaha fotsiny de mety ho eken’i hery vaovao ihany ny fodiany, saingy iza aminareo mpanao politika ireo moa no hoe mena-mivadika ? Izay no maha lalao menarana azy! fanina ny mpitazana fa aleo hifampitsako eo, samy ho vovoka avokoa ihany ny hiafarana hoy dada8 izay nony efa tena voatery nitsoaka nedala nanavotra ny ainy!
Tonga indray ireto alika tsisy fehy vozona.MAHONENA!!!
Fa ho an’iza moa no hiadivan’ny dadanay hatr@’izao ?
Efa mailaka ery ity vava fa » tokony tsy hanao politika » matahotra ny hitsikefonan’ny maloto
nafenina daholo fa efa zatra manao gaboraraka, matahotra ny ho very fihinanana ka terena fotsiny
ilay olona.Izany no aina koa te hangalatra!!!
Sendra izay olona mamba reraka ity firenena hany ka tsy misaina kely akory ny vava havoaka hanenjeana
olona mba miaro ny MARINA sy ny RARINY ao @ firenena.MAHAONTSA ITY TOE-TSAINA MIREFAREFA.
Tena hainao mintsy Ranavalona ny milza azy à!
Fa tsy azoko hoe maninona no tohanana ny hvm e? izay no zavatra tsy azoko!
Zavatra tsotra io, aiza no misy ny tombon-tsoan’ny malagasy? dia avelao ny zavatra lehibe tsy voafehy fa zavatra kely mafonja atao.
Maninona no tohanana ny hvm ?
Mba hiverenan’ireo mpitsetsitra ronono, satria very fotsiny atramin’izay TIKO nihidy izay ! Aleo ho an’olon-kafa toy izay an-kavana !
Na dia mbola tsy milamina aza ny tany, efa maika dia maika ny sasany ! Nadio ary tena nangarahara hono ny fifidianana ary tsy nisy osoka, ka noho izany dia tena nahazo fankasitrahana.
Ny fvm mihintsy no hitarika ny fety, ary toa hoe amin’ny 21 fa tsy 18 !
Miarahba atsik rehtra,zay ndray ny tenako vao nanoratra satria nandinika sy namankafaka ny zava-misy;tonga indray ny fotoana hanoratana arak’izany.Tena mety ny fanehoan-kevitrao Solo Razafy;mila mitandrina e
Efa any PARISY angah ?!
Tsara namana kosa kooo ! Tonga « maka » hevitra matetika ?!
Ka ho sahy handroaka ny karana sy Sinoa manao blanchiment d’argent sa ….???
Mety ihany rehefa mampiditra ny Fitsarana an’ireo aloha e ! Milaza ny alikàn’i Domelina ihany izao !
Tandremo sao kosa mamono biby tsy mahafaty, fa efa nanao ka dia ANTENAINA ho hatramin’ny farany na eo aza ireo namanao eto ambany eto ireo .
Mbola tsy tapaka tadi-poitra sa mbola tsy mahasara-nono @ reny malalany???
izay no hilazako hoe: mba matsintsiana ihany @’ilay fanindraindrana an-Rajao e!
Ny asa vita no hifampitazanina fa aza dia ny tombontsoan’ny tena kely ery no himatimatesana hanafotsiana
Raha nahazo 1,1% Rajao raha nadeha tsara ny fifidianana dia efa tena BE DIA BEU, koa hajanony ity filazana
fa lanim-bahoaka na ny miteni2 foana fa lany t@ isam-bato …..???tena tsy mety ry mpikabary eo @ Magro a!
Tsy hoe i Ravalamanana no tsy nahay nanetsa fa sendran’izay rivo-doza mafy ohatran’ny tora-biriky ka potika ilay vary nantenaina satria koa ny mpanentsa sasany lasa mpanentsina. Aza sendran’izay mpamadika ihany.
Ny GEM koa aza efa « mi-j’aime-j’aime » amin’ilay fvm !
Big love ! GEM & FVM CRAC & CRAC ! Zà koa Razy !
Mahaiza manetsa Ravalo?
En tout cas, rajao est entrain de blanchir au maximum son équipe.
Nommer le ndrema fils à la tête de la ville de la CUA est vraiment très intelligent. Maintenant, ils proposent des programmes bien mieux que le colliséum et autres hotel de ville.
C’est la preuve que ni le tgv, ni la transition, ni la révolution oransa n’avait de réels programmes de développement.
Que pouvaient-ils faire et réaliser avec les millions de $ investis et dans le coup d’Etat et les propagandes? Ms les intérêts personnels étaient plus but premier. Ce qui explique que tt ce qu’ils proposent aujourd’hui n’ont pas été faits au lendemain du coup d’Etat.
Le seul hic dans tout ça, c’est qu’ils restent cyniques dans leur mépris du peuple et des autres. On verra bien si les USA vont accepter leur demande de réintégration dans l’AGOA vu qu’ils n’ont rien fait de ce que les USA leur avaient demandé pdt toute la crise…
Isao fotsiny hoe: firy ny candidats nanaovan’ny ekipan’,ny HVM velapandrika sy atsonjay t@ fifidianana dia atokisana ve izy hoe hampody andRavalo?
Ny Hsina A ndriaanjato dia efa naman’i TGV fony izy ben’ny tanana, ary nitohy t@ fiaraha-nanongampanjakana teny @ 13 mai izany.
Précédent Article précédent : FILOHA RAVALOMANANA NO TENA NANANA NY FOMBA FIJERY MIFANARAKA AMIN’NY TAKIAN’NY VAHOAKA AMIN’NY FAMPIVOARANA NY FIRENENA
Suivant Article suivant : TSY SAKANA AMIN’ NY FANENDRENA PRAIMINISITRA ISIKA